जोन्सन र भेरोसिल खोपबारे जान्नै पर्ने केहि तथ्य « Lalitpur Khabar
अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको खोप थालिएको छ । नेपालमा १२ लाख ८१ हजारले लगाए कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप लगाइसकेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको जोन्सन खोप र चीनको भेरोसिल खोप लगाउँदै आइएको छ । यी दुई खोपमा के फरक छ ?, डा. रवीन्द्र पाण्डे यी दुई खोपमा यसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ ।
जोनसन खोप लगाएको २ हप्तापछि शरीरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध एन्टिबोडी तयार हुन्छ भने भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको २ हप्तापछि एन्टिबोडी तयार हुन्छ ।
जोनसन खोपले दुर्लभ रुपमा रगत जम्ने वा स्नायु प्रणालीसम्बन्धि समस्या देखिएको छ भने भेरोसेल खोपका साइड इफेक्ट पारदर्शी रुपमा बताइएको छैन ।
जोन्सन खोप सामान्य लक्षण रोक्न ७२ %, सिकिस्त नबनाउन ९६ % र कोभिडबाट मृत्यु रोक्न १०० % प्रभावकारी छ भने भेरोसेल खोप संक्रमण रोक्न ५० – ७९ % तथा सिकिस्त कोभिडबाट गम्भीर नबनाउन तथा मृत्यु रोक्न ९० % प्रभावकारी भनिएको छ ।
जोन्सन खोपलाई अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा मान्यता छ भने चीनको खोपलाई चीन, अरबियन / अफ्रिकन देशमा मान्यता दिइएको छ । खोपको व्यापारिक तथा राजनैतिक प्रतिष्पर्धाको कारण अहिले मान्यता जे भएपनि केहि समयपछि सबै खोपको मान्यता सबैतिर हुनेछ ।
दुवै खोपले कोरोना संक्रमण सरेपनि गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने सम्भावनालाई नगण्य बनाउँछन् ।
दुवै खोपले कति समयसम्म काम गर्छन भन्ने निश्चित छैन | समय बित्दै जाँदा मात्र खोपले काम गर्ने अबधि थाहा हुन्छ ।
आफ्नो उत्पादनलाई सबैले राम्रो भन्ने तर अरुको उत्पादनमा दोष देख्ने विश्वव्यापी परम्परा भएपनि यी दुवै खोप WHO बाट मान्यता प्राप्त र दर्जनौं देशमा लगाइएका खोप हुन् ।
डेल्टा भेरिएन्टको लागि दुवै खोप प्रभावकारी छन् ।
दुवै खोप करोडौं व्यक्तिले लगाएका छन् भने क्लिनिकल ट्र्याल पास गरेर बिकास भएका हुन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा मान्यता प्राप्त जुन खोप पाउन सम्भव छ, त्यहि लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । डा. पाण्डेकाे फेसबुकबाट